Kedu otu mbufịt si eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Tsunamis bụ ihe ịtụnanya nwere ike ibibi nwee ike ihichapụ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri na nkeji. Ha bụ ebili mmiri nke ebili mmiri na oke osimiri n'ihi ala ọma jijiji, mbuze, ugwu mgbawa ma ọ bụ mmetụta asteroid.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka ebili mmiri si eme, mgbe ahụ, m ga-akọwa n'uju ihe niile metụtara ndị a phenomena.
1 Kedu ihe bụ tsunamis?
2 Olee otú e si emepụta ha?
Kedu ihe bụ tsunamis?
Ndị na-achọ sọfụ na-achọkarị ebili mmiri kachasị mma iji "merie", ebe ha na-ekpori ndụ n'oké osimiri na ọnọdụ ya. Otú ọ dị, mbufịt abụghị egwuregwu. Ihe omume a nwere ike igbu otutu mmadu iri na abuo, dika nke mere na 2004 n’Oké Osimiri India, kpatara ọnwụ Ndị mmadụ 436.983.
Ebili mmiri nke ihe omume ndị a nwere ike ịlele karịa 100km ogologo, a elu ruo 30 mita, na njem na a ọsọ nke 700km / hYa mere, ị ga-agbapụ ha ngwa ngwa o kwere mee.
Olee otú e si emepụta ha?
Dịka anyị kwurula, enwere ike mepụta ha n'ọtụtụ ụzọ:
Ala ọma jijiji n'okpuru mmiri: mmegharị nke ala ndị a na-ebute site na mmegharị nke tectonic plate ndị dị n'ụwa. Na ime nke a, mmiri dị n’elu ma na-ada n’ihi ala ọma jijiji ahụ n’onwe ya na ike ndọda. Ka ọ dị ugbu a, mmiri na-agagharị na-anwa iru ọnọdụ kwụsiri ike.
Mmeghari okpuru mmiri nke okpuru mmiri: A pụkwara ịmepụta Tsunamis n'ihi enyemaka nke oke osimiri.
Mmiri mgbawa ugwu dị n'okpuru ala: Volcanoes nke dị n'okpuru mmiri nwere ike ịmepụta ike zuru oke iji mepụta nnukwu kọlụm mmiri nke ga-eme ka ihe ndị a pụta.
Asteroid metụtaraNnukwu okwute ndị a, nke ọ dabara n'ụzọ dị ntakịrị na mbara ala, na-akpaghasị mmiri dị n'elu. Ike dị otú ahụ na enwere ike ịmepụta oke ebili mmiri dị egwu.
Anyị nwere olile anya na ị mụtakwuola ihe ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu otu mbufịt si eme
Kedu ihe bụ nrụgide nke ikuku na otu o si arụ ọrụ?